Apple - Izaho dia Mac | Avy amin'ny Mac aho (Pejy 37)
Apple dia nilaza fa ny fanavaozana ny OS X, iWork ary iLife dia hijanona ho afaka amin'ny ho avy
Nanambara i Apple fa ny fanavaozana ny OS X, iLife, ary iWork dia hijanona ho afaka amin'ny ho avy manaraka ny Mavericks premise.
Olana amin'ny MacBookPro Retina vaovao
Mpampiasa marobe mihamitombo amin'ny MacBook Pro Retina vaovao no nanomboka nitatitra bibikely ao amin'ny forum…
Amin'ny volana martsa 2014 dia hanokatra ny magazay voalohany any Brezila i Apple
Apple dia hanokatra ny Apple Store voalohany any Brezila mandritra ny volana martsa 2014
Ny MacBook Pro Retina farany dia mijaly noho ny olana amin'ny fitendry ary ny fianjerana Boot Camp
Toa tsy nanomboka fanombohana ny MacBook Pro Retina farany farany satria vitsy ny mpampiasa nitantara ny olan'ny fitendry ary ny tsy fahombiazan'ny BootCamp
Mividy volamena aho. Fandefasana ny iPhone 5S sy 5C ao amin'ny Gran Plaza 2 any Madrid.
Tamin'ny taon-dasa tamin'ny andro fandefasana ny iPhone 5 dia nankany amin'ny Apple Store aho hividy azy, tonga toy ny ...
Lion Diskmaker, ny fomba mora indrindra hamoronana fiara USB amin'ny OS X Mavericks
Omaly dia nolazaiko anao ny fomba fametrahana OS X Mavericks amin'ny rangotra amin'ny alàlan'ny famoronana USB fametrahana, amin'izay dia esorina ...
Ahoana ny famokarana ilay Mac Pro vaovao? Efa hitanao amin'ny horonan-tsary izany
Apple taorian'ny nanehoany ny fiasa, ny fahafaha-manao ary ny vidin'ny Mac Pro vaovao koa dia naneho horonantsary hampianarana
Ampidiro ny Mavericks OS X amin'ny rangotra. Fametrahana "Madio" miaraka amin'ny Usb
Ampidiro ny Mavericks OS X avy amin'ny Scratch. Fametrahana madio amin'ny USB. Jereo ny Tutorial momba ny fomba hanamorana izany amin'ny Applelizados
Fofon'aina "Air" vaovao ho an'i Apple
Araka ny nantenaintsika rehetra dia nanolotra ny rindrambaiko vaovao ho an'ny Mac i Apple anio, ny famoahana ny Macbook Pro vaovao sy ...
Ny MacBook Pro Retina dia havaozina, mora vidy ary matanjaka kokoa
Ny fanavaozana efa nandrasana hatry ny ela an'ny MacBook Pro dia tonga niaraka tamin'i Intel Haswell ho fianakaviana CPUs ary indrindra mora vidy sy matanjaka kokoa.
Hevitra iray hafa no miseho ho an'ny Apple iWatch amin'ny ho avy
Hevitra vaovao iray hafa no miseho ho an'ny Apple iWatch amin'ny ho avy
Diovy daholo ny fako ao amin'ny Disk misy Disk Diag
Disk Diag dia rindranasa iray izay hanampy anao hanadio ny kapila ataonao amin'ny alàlan'ny fanasokajiana isan-karazany ny rakitra.
Apple dia namoaka fanavaozana ny firmware ho an'ny MacBook Air SSDs (Mid-2012)
Apple dia namoaka fanavaozam-baovao ho an'ny SSD ho an'ny kinova 1.1 ho an'ny MacBook Airs hatramin'ny Jona 2012 ka hatramin'ny Jona 2013.
Famerenana ny fandefasana iPhone any Espana
Amin'ny 25 oktobra ho avy izao, ny iPhone 5C sy 5S dia amidy any Espana. Miaraka…
Ny Comic Life 3.0 dia misy ankehitriny miaraka amin'ny fanampiana sy fanatsarana vaovao
Ny fampiharana malaza amin'ny famoronana sariitatra sy tantara an-tsary, Comic Life, dia vao nohavaozina amin'ny kinova fahatelo miaraka amin'ny fanampiana sy fanatsarana bebe kokoa.
Solosaina Apple I hafa noforonin'i Wozniak sy Jobs no miakatra lavanty
Apple iray hafa indray dia ho lavanty ao Breker
2011 MacBook Pros dia mampiseho glitches sary
Mpampiasa maro no mitatitra glitches sary samihafa amin'ny MacBook Pros 2011-n'izy ireo, olana iray izay toa lasa miparitaka be.
Sary sy video an'ny maodelin'ny campus Apple ho avy: SpaceShip
Fampisehoana ny maodelin'ny campus Apple vaovao ao Cupertino, SpaceShip
Makà OS X hanana fomba fijery manakaiky kokoa ny iOS 7
Amin'ity kitapo misy sary masina ity dia azonao atao izao ny manao ny Mac anao hitovy kely kokoa amin'ny fomba fahitan'ny iOS 7.
Ahoana no hamerenan'ny orinasa ny Mac anao raha hivarotra azy ianao
Manome anao toro-hevitra maromaro izahay alohan'ny hivarotana ny Mac anao ary hamerina azy io amin'ny ozinina.
Apple dia namoaka ny fanavaozana ny EFI ho an'ny MacBook Air (Mid-2013)
Vao nohavaozin'i Apple ny kinova EFI amin'ny MacBook Airs (tapaky ny taona 2013) hanatsarana ny fifanarahana amin'ny Windows sy Boot Camp.
Manomana rindrambaiko birao lavitra vaovao ho an'ny OS X sy iOS i Microsoft
Microsoft dia manomana kinova nohavaozina tanteraka amin'ny biraony lavitra mba hanombohana amin'ny faran'ity volana ity ary izay havoaka ho an'ny iOS sy OS X
Nest Protect, mpamantatra setroka mahavariana fotsiny
Namoaka mpamantatra setroka antsoina hoe Protect i Nest
Sharp dia manambara mpitsikilo manana vahaolana 4K sy fanohanana ny OS X
Vao avy nampiditra maodely 32 diagonal i Sharp ankoatry ny vahaolana 4K izay mampiditra ny fanohanana mpamily feno ho an'ny OS X
Ahoana no hamonjy batterie iPhone 5, 4 na iPad amin'ny fika iOS 7: 11
Ny toro-hevitra 11 sy ny tetika azo antoka hamonjy bateria amin'ny iPhone 5, 4, 3, 5s, 4s amin'ny iOS 7. Jereo ao amin'ny Apple izy ireo
Hamarino tsara fa hamafa mandrakizay ireo rakitrao amin'ny OS X
Atorinay anao ny fomba fanadiovana soa aman-tsara ny fako sy hamafana maharitra ireo rakitra izay tsy tianao ho sitrana.
Iza marina i Siri?
Roa taona lasa izay, indrindra ny 4 Oktobra 2011, taloha kelin'ny nahafatesany ...
Ahoana ny fomba hanamaizina ny efijery an'ny iMac rehefa mampifandray mpanara-maso ivelany ianao?
Fampiharana ahafahantsika manamaizina ny efijery iMac rehefa manao AirPlay isika
Ahoana ny fomba hanovana ny safidy famenoana autofill ao amin'ny browser Safari
Firafitra vaovao ho an'ny SMC an'ny MacBook Air sy MacBook Pro
Apple dia namoaka firmware vaovao ho an'ny MacBook Air sy Pro (mid2012) mandroso izay manamboatra bug izay mety hahatonga ny bateria hijanona tsy hiasa intsony
Apple dia manakarama an'i Ben Shaffer, talen'ny famolavolana Nike
Ny talen'ny famolavolana Nike Ben Shaffer dia nalain'ny Apple azo inoana fa hiasa amin'ny iWatch amin'ny ho avy.
Apple no orinasa manavao indrindra indrindra amin'ny taona fahasivy manaraka
BCG na Boston Consultin Group dia nanondro an'i Apple ho orinasa manavao indrindra indrindra hatramin'ny fahasivy nisesy nanomboka tamin'ny namoronana ity laharana ity tamin'ny 2005
VLC dia nohavaozina amin'ny kinova 2.1 miaraka amin'ny fanohanan'ny 4K
VLC dia vao nohavaozina amin'ny kinova 2.1 ao anatin'izany ny fanohanana feno ny vahaolana 4k
Unboxing voalohany ny loko volamena iPhone 5S
Sary unboxing voalohany an'ny iPhone 5S
Manome kaody roa izahay ho an'ny fampiharana Snapheal Pro #SorteoSoydeMac
OS X Server havaozina ho an'ny Mountain Lion
Apple dia nanavao ny OS X Server ho an'ny 2.2.2 ho an'ny Mountain Lion
Ampifandraiso amin'ny kitendry Kanex Multi-sync ny fitaovanao rehetra
Ny kitendry Kanex Multi-sync dia ahafahanao mampifandray ny fitaovanao rehetra amin'ny fotoana iray, hahafahana mifamadika eo anelanelan'ny iray sy ny iray hafa miaraka amin'ny tsindry bokotra iray.
Ahoana ny fanadiovana ny Mac anao tsotra, mora ary mandaitra
Fomba tsotra hanadiovana ny Mac ao anatin'ny minitra vitsy ary amin'ny vola kely dia kely
TILT Stealth dia manatsara ny rivotra ao amin'ny MacBook Pro
Avy amin'ny KickStarter dia mahazo tetikasa iray hafa isika amin'ity indray mitoraka ity amin'ny endrika mari-pana ho an'ny MacBook Pro izay hampidina ny mari-pana ao aminy.
Afaho ny RAM be atao sy tsy ampiasaina miaraka amin'ny MemoryKeeper
Amin'ny alàlan'ity programa fandefasana memo RAM ity dia hahafahanao mandeha ho azy ny fizotrany ary mifehy ny fahatsiarovanao manafaka.
Apple dia manomana fivarotana vaovao amin'ny ho avy One World Trade Center
Apple dia mamarana ny drafitra hanokafana magazay vaovao ao amin'ny Mall an'ny One World Trade Center ho avy any New York.
Nampihetsika ny protokolon'ny IMAP i Microsoft
Azavainay ny fomba handefasana ny Outlook amin'ny Mac hampiasana ny protokolon'ny IMAP vaovao
Google dia namerina namerina ny Snapseed ho an'ny Mac amin'ny alàlan'ny browser-ny
Snapseed, mpanonta sary Google izay najanona ho an'ny mpampiasa Mac, dia nampidirina indray fa tamin'ity indray mitoraka ity tamin'ny alàlan'ny Google + ary niaraka tamin'i Chrome ihany.
Ny sary vaovao an'ny iOS 7
Taorian'ny "be resaka" Apple Keynote tamin'ny talata lasa teo, dia namoaka ny kinova Golden Master an'ny iOS 7 ho an'ny mpamorona i Apple, ...
Ilaina ny Apple ID rehefa manao famandrihana ao amin'ny Bar Genius
Manomboka izao dia novain'i Apple ny rafitra famandrihana ka isaky ny irinao
Tonga eo an-tampon'ny Apple ny fanovana.
Herintaona mahery izay no niresaka momba ireo fanovana mety hitranga sy izay tanterahina ao amin'ny Apple; Nanaitra anay tamin'ny efatra santimetatra izy ireo, mini iPad misy tsipika famolavolana manaitra farafaharatsiny, ary koa ny iOS 7 nohavaozina ary ny mety ho iPhone Low Cost. Androany, roa andro aorian'ny Keynote tsy nisy gaga dia nahatsikaritra izay atahorantsika, ireo ao Cupertino dia manova ny làlan'ny orinasa.
Ahoana no fomba fanorenanao Apple Store?… Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny horonan-tsary
Asehonay aminao ny horonantsary Apple anatiny izay efa tafaporitsaka, momba ny fanatanterahana ny fananganana Apple Store.
Nesorin'i Apple vonjimaika ny Adobe Flash tao amin'ny OS X noho ny olana ara-piarovana
Apple misotro ronono ny plugin Adobe Flash noho ny olana ara-piarovana amin'ny kinova 11.8.800.94, ny kinova 11.8.800.168 novaina indrindra ihany no mandeha.
Inona no antenaina amin'ny Apple Keynote rahampitso?
24 ora monja taorian'ny nankalazana ny keynote vaovao an'ny Apple dia toa nilamina ny onjan'ny tsaho ...
Jereo ny IP an'ny fitaovana rehetra mifandray amin'ny tamba-jotra eo an-toerana
Baiko tsotra hamahana tranga iray
iRig Pro, fampitana haino aman-jery multimedia ho an'ny Mac, iPhone ary iPad
Ny orinasa IK Multimedia dia nanolotra ny iRig Pro, ny haino aman-jery multimedia, MIDI ary XLR vaovao ho an'ny iPhone, iPad ary Mac
Kickstarter: boaty fibre karbaona ho an'ny MacBook anao
Tetikasa Kickstarter iray hafa no mitondra antsika amin'ny tanan'ny mpamorona azy, Chetan Raj, fonosana fibre karbaona hitaterana ny MacBook.
mLogic dia manambara ny mBack, kapila mafy ivelany izay mipetraka ao aorinan'ny iMac
Fitaovana vaovao ho an'ny iMac, kapila mafy ivelany antsoina hoe mBack
Fanadihadiana vaovao Apple momba ny fitarainana amin'ny fitrandrahana asa
Apple dia efa nanomboka nanadihady ny fitarainana vaovao amin'ny fitrandrahana asa any amin'ny iray amin'ireo mpamatsy azy
Zarao amin'ny iMessage ny rakitrao avy amin'ny Mac
iMessage Ny serivisy fandefasan-kafatra eo noho eo Apple dia azo ampiasaina hizara rakitra haingana sy mora ihany koa
Mandrosoa fampandrenesana ao Safari, zavatra tena manan-danja ho an'i Apple
Apple dia nandefa mailaka mpandraharaha mba hiomana hanohana ny fampandrenesana ny Safari push.
Parallels Access, fehezo ny PC na Mac anao
Miseho ny Virtual Parallels App hanatsarana ny virtualin'ny Mac APPS amin'ny iPad
DeskConnect dia mamela anao hamindra atiny avy amin'ny Mac mankany amin'ny iPhone na ny mifamadika amin'izany
Deskconnect dia rindranasa ho an'ny Mac sy iOS izay hampifanaraka ny solosaina handefasana atiny, toerana, URL ... eo amin'izy ireo.
Logitech dia manolotra ny 'UltraThin Touch Mouse' ho an'ny Mac
Andro vitsy lasa izay, Logitech dia nanolotra ny totozy 'UltraThin Touch' ho an'ny Mac sy PC miaraka amin'ny aliminioma borosy sy ny fahaizan'ny multi-touch
Ny ambaratonga Macintosh 1/3 an'ny original
Mpankafy sy mpankafy ny tontolon'ny Mac no tonga tamina hevitra adala hamoronana Macintosh mizana 1/3 am-boalohany avy amin'ny Raspberry Pi.
Roa ambin'ny folo atsimo mandefa GhostStand, fijoroana mangarahara ho an'ny MacBook rehetra
Amin'ny anaran'ny GhostStand, ny orinasan-tsoratry ny South South dia nanolotra fijoroana mangarahara manan-kery ho an'ny MacBook rehetra.
Steve Wozniak dia miresaka momba ny hoavin'ny Apple, Microsoft ary Samsung
Steve Wozniak, mpiara-manorina an'i Apple, dia naneho ny heviny momba ireo orinasa teknolojia telo lehibe tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny BBC
Philips Hue dia manjary mibolisatra ao amin'ny OSX
Philips handefa fampiharana ho an'ny OSX izay hifehy ny takamoa Philips Hue
Ahoana no namoronana an'i Steve Jobs ny App tonga lafatra, Keynote
Lazainay aminao ny tantara ao aorian'ny fampiharana Keynote an'i Apple
Kickstarter: Roccat 4, mpizaha tranonkala "hafa" ho an'ny Mac
Avy amin'ny KickStarter dia manana tetikasa hafa izahay ary amin'ity indray mitoraka ity amin'ny endrika mpizaha tranonkala dia Roccat 4 no anarany ary manolotra hevitra mahaliana vitsivitsy izy.
Ny Apple Store voalohany any Brezila dia hisokatra amin'ny Desambra
Ary farany dia hanana Apple Store any Rio de Janeiro i Brezila izay azon'ireo te hahafantatra sy mpampiasa.
Lahatsary fakantsary miafina izay mampifangaro iMac sy mikorontana
Karatra SD PNY StorEDGE, 128Gb ary 64Gb ho an'ny Mac
PNY, marika iray an'ny kojakoja malaza sy fitaovana enti-miasa mifanaraka aminy, dia namoaka karatra SD misy roa ...
Logic Pro X dia havaozina amin'ny kinova 10.0.2 miaraka amin'ny fanitsiana bibikely
Logic Pro X, tonian-dahatsoratry ny mozika matihanina izay ampiasain'ny Apple ho an'ny mpanjifany, dia vao nohavaozina tamin'ny kinova 10.0.2, manitsy lesoka.
'Shadowgun: DeadZone' dia miseho amin'ny Mac
Shadowgun: Deadzone, iray amin'ireo mpanafika malaza indrindra amin'ny sehatra finday, tonga maimaim-poana amin'ny Mac, ahafahanao mampifanaraka ny fandrosoanao.
Te hiasa ao amin'ny Apple ve ianao? 13 banga asa vaovao any Espana
Fanavaozana ny firmware 7.6.4 ho an'ny tobin'ny seranam-piaramanidina
Apple dia namoaka fanavaozana firmware ho an'ireo tobin'ny Airport izay manamboatra bug isan-karazany.
Ny mpanorina ny Oracle dia mino fa efa mihena ny Apple anio
Larry Ellison, mpanorina ny Oracle, dia nanambara tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny CBS fa i Apple tsy misy an'i Steve Jobs dia hihena tanteraka.
Ny Pirate Bay izao dia manana mpitety tranonkala manokana
Ampidiro ny mailakao amin'ny mailaka miaraka amin'ny GPGTools
Ny tetikasa loharano mivelatra mifototra amin'ny OpenPGP dia nahatratra ny kinova faharoa ary tafiditra ao amin'ny client Mail ho an'ny Mac ary mampiditra ny mailakao araka izany
Chrome eo amin'ny sehatra mazava momba ny politikany fiarovana
Ny teny miafina voatahiry ao amin'ny Chrome dia mety ho hitan'izay miditra amin'ny tontonana fikirakirana, mampifandray ny tranonkala amin'ny tenimiafina.
Tantano ny lakile SHIFT
Amboary ny fanalahidy fanalahidy sy ny fampiasana CapSee
Omniweb browser dia nohavaozina amin'ny kinova 6.0
OmniGroup dia nanavao ny tranokala OmniWeb malaza ho an'ny Mac ho an'ny kinova 6.0
Disk Drill no ho mpiara-miasa lavorary amin'ny famerenana rakitra sy fisarahana
Avereno indray ny fizarana feno mankany amin'ireo rakitra voafafa tsy nahy tamin'ny Disk Drill avy amin'ny mpamorona Clever Files.
Tetikasa vaovao iray mahaliana no miseho ao amin'ny Kickstarter: bind
Avereno ny tenimiafin'ny tobin'ny seranam-piaramanidinao
Raha tsy tadidinao ny teny miafin'ny tobin'ny seranam-piaramanidinao, dia hasehonay anao ny fomba hamerenana azy
Valio ny iPhone amin'ny Mac miaraka amin'ny Dialogue
Fampiharana tsotra ahafahanao mamaly ireo antso miditra ao amin'ny iPhone misy anao nefa tsy maka izany, ary koa miantso sy mandrakitra antso
Kickstarter: Mahatsiaro ho mpamokatra sarimihetsika miaraka amin'ny HitFilm 2
HitFilm 2 dia rindrambaiko fanovana horonantsary misy zavatra maro azo atao ary tonga eto aminay avy amin'ny orinasa FXhome ho tetikasa ao amin'ny Kickstarter.
Vaky na mainty ny efijery Mac (II) Inona no azoko atao izao?
Vaky ny maintin'ny Mac na mainty (II) Inona no azoko atao izao?
Vaky ny lamba Mac na mainty (I) Inona no azoko atao izao?
Vaky na mainty ny efijery Mac Inona no azoko atao izao? (I)
Ny fenitra USB 3.1 dia fifaninanana vaovao an'ny Thunderbolt
Ny fenitra USB 3.1 vaovao dia efa voafaritra miaraka amin'ny hafainganam-pandeha akaikin'ny 10Gbps ary hifaninana mivantana amin'i Thunderbolt
Fampiharana valo amidy miaraka amin'ny fonosana "The Mac Bundle Variety 4.0"
Avy amin'ny Mactrast dia manolotra fonosana vaovao "Mac Variety Bundle 4.0" miaraka aminay fihenam-bidy lehibe.
Izy ireo dia mahavita mampifandray karatra fanaovana sary avo lenta amin'ny MacBook air 11 ″
Izy ireo dia mahavita mampifandray karatra fanaovana sary avo lenta amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo Thunderbolt ao anaty 11 "MacBook Air, manome azy hery bebe kokoa
Misotro ronono i Bento mba hanome lalana ho an'ny FileMaker ihany
Bento for Mac dia hijanona tsy hamidy intsony mba hahafahany mifantoka irery amin'ny orinasa irery amin'i FileMaker
Apple dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny Final Cut Pro X v10.0.9
2013 MacBook Airs dia manana olana amin'ny écran
Ilay Haswell MacBook Airs vaovao dia mijaly amin'ny olan'ny efijery mainty izay efa notaterin'ny mpampiasa maro momba ny forum fanohanana an'i Apple.
Raha tsy manomboka ny Mac-nao dia aza mikoropaka
Asehonay anao ny torolàlana kely momba ny dingana tokony harahina raha tsy manomboka ny Mac-nao
Fanavaozana ny lojika Pro X ao anatin'ny fotoana firaketana
Apple manavao ny Logic Pro X, ny programa fanovana mozika matihanina miaraka amina fanamboarana bibikely maro sy fanatsarana ny fahombiazana amin'ny ankapobeny.
Apple no manao ny asa lehibe indrindra amin'ny tantarany
Apple dia nanatontosa dingana iray amin'ny fahazoana mizara hanome lanja ny orinasa, matoky ny mety hitranga.
Inona no hatao raha tsy miasa intsony ny totozy
Atorinay anao ny dingana manaraka hanarahana ny antony nijanonan'ny totozy, dia hojerentsika avy amin'ny fampiharana, ny rafitra ... na ny totozy aza.
Apple, orinasa misy fanovana tsy ho ela.
Ny toe-javatra marefo an'i Apple dia manome zavatra betsaka horesahina, ary vao mainka aza miaraka amin'ny firoboroboan'ny haitao izay ahitantsika ny tenantsika. Mandrosoa ary manohy mamaky.
Torohevitra sy tetika tsara indrindra ho an'ny MAC OS X
Apple dia nanamboatra rafitra fandidiana izay, na dia tsy lavorary aza, dia tena akaiky. Miaraka amin'ilay andalana ...
Ovao ny mailaka mifandraika amin'ny Apple ID anao
Mampianatra anao ny fomba fanovana ny mailaka mifandraika amin'ny Apple ID ianao satria namorona iray hafa amin'ny mpamatsy hafa ianao na satria nanapa-kevitra ny hanao izany ianao.
Tutorial: Mametraka horonan-tsary amin'ny fampiharana VLC
Fampianarana hitantanana ny fampiharana VLC ho an'ny IOS. Nanazava tsikelikely.
Apple dia namoaka fanavaozana ho an'ny MacBook Air 2013
Vao namoaka fanavaozana rindrambaiko ho an'ny MacBook Air 2013 i Apple izay manamboatra ireo olana niseho
Logitech dia manambara ireo mpandaha-teny Z600 Bluetooth misy endrika kanto
Logitech dia nandefa ireo mpandahateny Z600 niaraka tamin'ny fifandraisana Bluetooth sy endrika izay mifanaraka tanteraka amin'ny tsipika Mac
Lilyview, mpijery sary maivana
Avy amin'ny tanan'ny mpamorona ny DaisyDisk, i Lilyview, mpijery sary manokana izay mora ampiasaina indrindra.
Rasomware iray miaraka amin'ny FBI ho toy ny maunu, manafika ny mpampiasa OSX
Amin'ity tranga ity dia misy hackers sasany mampiasa ny fialan-tsinin'ny FBI ho toy ny farango hijerena raha toa ka "latsaka" ao anaty fandrika ireo mpampiasa tsy mailo indrindra
Gyazo dia maka ny efijeryo amin'ny fomba tsotra indrindra
Hanampy anao hisambotra ny efijeryo amin'ny fomba mora i Gyazo ary avy eo hampakatra ny sary ao amin'ny kaontinao Gyazo hizara azy.
Readkit dia havaozina amin'ny kinova 2.2 miaraka amin'ny fanohanana serivisy maro
Readkit dia nohavaozina amin'ny kinova 2.2 ary mitondra miaraka aminy fampitahana miaraka amin'ny Feedly, Feed Wrangler, Readability ary serivisy maro hafa.
Ahoana ny fomba hanafenana PDF alohan'ny handefasana azy amin'ny alàlan'ny mailaka
Asehonay aminao ny fomba fanaovan-encrypt ny rakitra PDF misy teny miafina alohan'ny handefasana azy amin'ny alàlan'ny mailaka.
Apple, orinasa maitso sy mangarahara.
Apple dia "hafa ny eritreriny" hatramin'ny nanombohany. Ilay Apple I, nanao lavanty vao haingana tamin'ny $ 388.000 "maotina" ary azonay sokajiana ho ...
Ny fampiasana AirPort dia novaina ho amin'ny kinova 6.3.1
Manome voninahitra an'i Steve Jobs ny fahatsiarovana an'i Disney amin'ny fampirantiany D23
Ny lanonana fanao isan-taona ho an'ireo angano Disney izay nandray anjara betsaka indrindra tamin'ny naha-orinasa azy ireo ankehitriny dia hanome voninahitra an'i Steve Jobs sy i Dick Clark.
Raha mampiasa FileVault ianao dia mety hahaliana anao ity fikafika ity hampitomboana ny filaminana
Hatsarao ny fiarovana anao noho ny FileVault arahin'ity fikafika ity ho an'ny OS X
Paikady famporisihana vaovao an'i Apple
Andro vitsy lasa izay dia navoakako tao amin'ny "Apple and the Windows univers" ny filàna fanalefahana ny vidin'ny vokatra ...
Tutorial, ny fomba fitantanana mahomby ireo lahasa amin'ny iDevices. [Alahady tolakandro]
Amin'izao fotoana izao dia tena miasa be sy matetika isika, miangona toy ny kiraro ao anaty ...
Inona no hatao raha nianjera ny App Disk Utility?
Iza no MacBook Air izay tokony hofidinao, ny Core i5 na ny Core i7
Anandtech dia nanao fampitahana kely teo anelanelan'ny processeur Haswell an'ny Macbook Air, ho hitantsika ny fahombiazan'ny roa tonta.
Ny mpamorona ny voalavo voalohany Douglas Engelbart, dia maty tamin'ny faha-88 taonany
Snuglet dia miseho ao amin'ny Kickstarter ary hiantoka ny MagSafe 2 anao
Nisy tetikasa Kickstarter iray hafa niseho, amin'ity indray mitoraka ity dia Snuglet, fanampim-panazavana kely izay hisakana ny MagSafe 2 anao "tsy hovotsorana".
Amboary ny lesoka fahazoan-dàlana ao amin'ny Dropbox
Ampianarinay anao ny fanamboarana fahazoan-dàlana noho ny tsy fahombiazana indraindray mety hitranga ao amin'ny Dropbox
Wallpaper 9 maimaim-poana ho an'ny Mac, iPhone, iPad na PC antsika
Apple dia nanome paty ny sary famantarana Facetime vaovao
Ny sary famantarana Facetime vaovao navoaka tao amin'ny iOS 7 dia toa ny fenitra ihany koa ho an'ny Mac ary Apple nanome patanty azy.
Ahoana ny fanararaotana ny fahaizan'ny MacBook Air [Alahady tolakandro]
Ny MacBook Air dia fitaovana tsy mampino na izany aza, mijaly noho ny tsy fahampiana indraindray: ny fetran'ny voafetra ...
Mac Pro: fampiasana slot fahatsiarovana tena "miverimberina"
Rehefa manatanteraka fitomboan'ny fahatsiarovan-tena ao amin'ny Mac Pro antsika dia mitsambikina ny fampatsiahivana hampitandrina antsika momba izany, fa inona no hatao raha manao izany foana izy?
Patch beta "MacBook Air WiFi Update 1.0" hamahana ny olan'ny Wi-Fi
Amin'ny maha program na beta patch azy dia efa natomboka ny "Macbook Air WiFi Update 1.0", ka misy ny mpampiasa nofidian'i Apple no manao tatitra raha tena miasa
Ny Macbook Air 2013 sasany dia mampiseho olana mirehitra ao amin'ny Photoshop
Miangona ny olan'ity taranaka Macbook Air vaovao ity. Taorian'ny fanapahana Wi-Fi ankehitriny dia anjaran'ireo blinks amin'ny photoshop.
Airplay Mirroring miaraka amin'ny Airparrot izay manao kopia ny efijery Mac amin'ny fahitalavitra
Airplay Mirroring miaraka amin'ny Airparrot izay miakatra, manao kopia ary manidy ny efijery Mac amin'ny fahitalavitra. Apple Tv Mirroring. Jereo hoe Ahoana no hanaovana azy amin'ny Applelizados
Windows 8.1 sy OS X Mavericks, fomba roa samy hafa
Windows version 8.1 dia nandray dingana niverina hamerenana ireo ampahany nesoriny tao amin'ny Windows 8, etsy ankilany Mavericks mandroso amin'ny tsipika lojika.
Apple mandefa fanentanana dokam-barotra amin'ny gazety
Apple dia manao doka amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny gazety amerikana, manohana ireo dokambarotra amin'ny fahitalavitra aparitany amin'ny kaontinanta.
Apple manohana ny fanoloana Airbook Macbook amin'ny olan'ny WiFi-ac any Etazonia
Apple dia mahita ny fiara MacBook Air misy tsy fahombiazan'ny WiFi mba hamahana ilay olana
Sony dia "manisy vy" amin'ny ho avy ny Apple fa tokony iWatch
Toa te hanana "ady" i Sony ary mandrehitra ireo fanahy amin'ny alàlan'ny twitter momba ny iWatch an'i Apple.
Inona no hatao raha nianjera ny App Store
Ampianarinay ianao hamaha ny fianjerana tampoka ao amin'ny App Store rehefa handeha hanavao ny rindrambaiko izahay.
Bug ny Facebook dia manambara kaonty 6 tapitrisa mahery
Fahadisoam-piarovana tao amin'ny Facebook no hitan'ny vondrona hacker "tsara" omaly, izay nitory ilay hadisoana tamin'ny goavambe media sosialy.
Ny tranofiara ofisialy voalohany amin'ny sarimihetsika 'Jobs'
Mizarà HDD ho an'ny backup lavitra
Betsaka aminareo no nilaza tamiko fa tianao ilay fampianarana kely momba ny Time Machine izay nataonay taloha. Ka ianao ...
iOS 7, Beta misy potika be. [REVIEW]
Hazavainay tsara ny lohatenin'ny lahatsoratra ary izany dia ny beta iray (amin'ity tranga ity) rindrambaiko vonjimaika ...
Ny baterian'ny Macbook Air 13-inch vaovao dia nosedraina
Ny famoahana sy ny mpandalina samihafa dia nanapa-kevitra ny hitsapa ny baterin'ny Macbook Air vaovao amin'ny fitsapana isan-karazany.
Hisy ve ny fampisehoana iMac sy Thunderbolt vaovao misy vahaolana amin'ny retina amin'ity taona ity?
Ao amin'ny OS X Mavericks dia nahitana rindrambaiko misy vahaolana 5120 x 2880 teboka, izay manome be ny eritreritra momba ny famahana ny retina.
Microsoft Office 2011 ho an'ny Mac dia navaozina ho v14.3.5
iFixit dia mikarakara ny famongorana ny Airport Extreme vaovao
Averina indray, iFixit dia miandraikitra ny famongorana ny router farany natolotr'i Apple vao roa andro lasa izay.
Haingana be ny fitehirizana ny Macbook Air vaovao
Ity faritra MacBook Air 2013 vaovao ity no Mac haingana indrindra hatreto raha ny amin'ny tahiry SSD no resahina
Vakio ny bokinao amin'ny iBooks vaovao ho an'ny Mac
Apple dia mandefa ny fampiharana iBooks ao amin'ny rafitra fiasa OSX Mavericks vaovao
IWork suite dia manidina amin'ny rahona
Apple mandefa ny efitrano fiasan'ny iWork mba hampiasaina ao amin'ny rahona iCloud.
Tutorial ny fomba fametrahana iOS 7 nefa tsy mpamorona
Tutorial momba ny fametrahana ios 7 amin'ny iPhone, iPad na iPod, tsotra be sy miaraka amin'ny vaovao rehetra momba ny iOS7 vaovao nefa tsy mpamorona.
Ny fampiasana seranam-piaramanidina dia tonga amin'ny kinova 6.3
Vao avy nanavao ny fampiasana azy i Apple mba hitantanana ny tobin'ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny kinova 6.3 miaraka amina endrika vaovao vitsivitsy
Azo alaina izao ny sary sokitra OS X Mavericks vaovao
Nohavaozina ny Airport Extreme sy ny Time Capsule handraisana WiFi 802.11 ac
Apple nandritra ny fotoana fohy vetivety tamin'ny famelabelarana ifotoran'ny WWDC dia namoaka ireo toby fijanonan'ny seranam-piaramanidina vaovao niaraka tamin'ny fanohanana Wi-Fi 802.11ac sy ny fanavaozana vaovao.
Adobe Introduces Lightroom 5 Manampy endri-javatra bebe kokoa
Adobe dia namoaka ny Lightroom 5 taorian'ny nahavitany ny programa beta nandritra ny roa volana, miaraka amin'ny fanatsarana lehibe ary mazava ho azy amin'ny fanamboarana bibikely.
Manana olana amin'ny fametrahana OS X 10.8.4?
Misy ny fitarainana ao amin'ny forum fanohanana an'i Apple noho ny olana mifandraika amin'ny fametrahana ny fanavaozana ny OS X 10.8.4
Intel dia mampiseho prototype ny fahatsiarovana USB Thunderbolt miaraka amin'ny 128Gb
Intel dia naneho prototipe USB usb prototype miaraka amin'ny fahafaha-manana 128Gb ary ny tena zava-dehibe, hafainganam-pandeha hatramin'ny 10Gb / s.
Aperture dia havaozina amin'ny kinova 3.4.5
Apple manavao aperture, ny sary retouching suite, ho an'ny kinova 3.4.5 ao anatin'izany ny fanatsarana sy ny fanitsiana bibikely
Ny Apple Store ao Las Vegas 'Fashion Show' sy ny fanavaozana azy
7-port USB 3.0 hub misy alimo avy any Satechi
Hub maoderina misy seranana 7 USB 3.0 vita amin'ny aliminioma ary amin'ny endriny roa
Zahao ny satan'ny baterian'ny MacBook anao toa ny teknisiana Apple
Mandidy ny hanamarina ny tena toeran'ny bateria an'ny MacBook anao
Apple nanampy fihenam-bidy ho an'ny sehatry ny fanabeazana MacBook Pros
Kernel Panics amin'ny Macbook Pro tamin'ny tapaky ny taona 2010 niaraka tamin'i Mountain Lion
Rehefa avy namoaka patch i Apple mba "hanamboatra" an'ity bibikely ity dia toa miseho amin'ny 2010 Macbook Pro ny fikorontanan'ny kernel
Fomba efatra hampiasana Time Machine, safidio ny anao
Time Machine dia iray amin'ireo zava-baovao farany tsara, hatreto, natolotr'i Apple ny fahatongavan'i Mac OS X ...
WWDC 2013, lasa matotra i Apple
Tsy misy tapa-bolana latsaka ny hanatanterahana ny WWDC 2013. Amin'ity fivoriana ity izay tena hahaliana ...
Lahatsary miaraka amin'ny resadresaka nifanaovan'ny AllThingsD niaraka tamin'i Tim Cook
Vonoy, avereno indray na apetraho ao anaty torimaso tsotra ny Mac OSX anao
Vonoy, avereno indray na apetraho ao anaty torimaso tsotra izao ny Mac OSX
Asehonay aminao ny fomba fampifandraisana ny mpanera anao hilalao amin'ny Mac
Ampianarinay ianao hampifandray ny mpanera ny lalao amin'ny Mac ary hamboarinao tsara.
Sarin'ny karatra Wi-Fi 802.11ac izay hampiditra ireo Mac manaraka
TheLostSwede dia naka sary ny iray amin'ireo karatra voamarina 802.11ac izay hampidirina ho Macs ho avy